China 900KG, 1Ton Box iimagnethi For Precast Tilting Itheyibhile Umngxunya Ukulungisa abenzi kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
900KG Ibhokisi Magnet ubungakanani bebhokisi yamagnetic rhoqo kulwakhiwo lwefomathi, zombini zomthi kunye necala lesinyithi elisecaleni, elidityaniswe neqokobhe lekhabhoni kunye neseti yenkqubo enqabileyo yomhlaba ye-neodymium.
Inokwenziwa ngokucinezela nje phantsi iqhosha ngesandla okanye ngonyawo. Ukuzicima ukuba zisebenze, iimagnethi zikhutshwa ngokulula sisixhobo sentsimbi (ukutsala iqhosha). Kwimeko yokungasebenzi, iimagnethi ezivaliweyo zinokususwa ngokulula kwifom yetafile. Iimagnethi zangaphambi kwesamente zinokusetyenziswa zodwa okanye zidityaniswe neadpator ukulungisa ifom. Ngokwesiqhelo ibhokisi yemagnethi yamandla e-900Kg ilungele ngokufanelekileyo ukuveliswa kwepaneli yodonga oluyi-60-90mm.
Thina, Meiko Magnetics, ziingcali kuzo zonke iintlobo zezisombululo zemagnethi zeshishini lekhonkco lekhonkco. Unokufumana zonke iimfuno zakho eziqhelekileyo okanye inkqubo yamagnetic eyenziwe apha ye-precast.
Egqithileyo 450KG Box iimagnethi kunye Push-tsala iqhosha
Okulandelayo: 1350KG, 1500KG Uhlobo lweMagnetic Formwork System
I-1000KG yeBhokisi yeMagnet
1Ton Umthamo weMagnet Box
900KG Ibhokisi Magnet
Magnets amaqhosha 900KG
Amandla oMbane weKhonkrithi angama-900KG
Inkqubo ye-Magnetic Formwork ye-900Kg
Iimagnethi eziPhathekayo ze-900KG